Akụkọ - akpaaka nhicha onwe na -akwado udo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
A bịa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọtụtụ ndị mmadụ na -eche maka isiokwu doro anya dịka okike na nchekwa gburugburu ebe obibi. Green nwere ihe ndụ pụtara na ọdịbendị ndị China, ma na -egosipụtakwa nguzozi nke gburugburu ebe obibi.
Agbanyeghị, site na mmepe ụlọ ọrụ na -aga n'ihu, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -agbada ngwa ngwa. Ma ọ bụ oke ọhịa na -acha akwụkwọ ndụ, oke osimiri ma ọ bụ osimiri na ọdọ mmiri na -akwagharị, mmetọ nke mkpofu ụlọ ọrụ na -ebelata kwa afọ. Ihe nnọchianya nke ndụ mmadụ na ụwa agbanweela site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ruo oji. Ihe nzacha na-ehicha onwe ya na-akpaghị aka, akụrụngwa nchekwa gburugburu ebe obibi na-eto nke ọma, ozugbo ebido, ọ dị ka ọ na-etinye ike ọhụrụ n'ime ọha.
Site na mmụba nke mmetọ gburugburu ebe obibi, ngalaba nchekwa gburugburu ebe obibi dị mkpa nke China ejirila nwayọọ nwayọọ malite ilebara nsogbu gburugburu ebe obibi anya. Ka ọ dị ugbu a, a na -ewebata iwu na ụkpụrụ nchekwa gburugburu ebe obibi mgbe niile iji chekwa gburugburu na osimiri ka ha ghara imebi ọzọ. Nanị iwu na ụkpụrụ adịghị arụ ọrụ maka ụfọdụ ndị mmadụ nke amaghị ikike iwu; Site na iwebata nzacha nhicha onwe onye na-akpaghị aka, ọtụtụ mmadụ na-amata nchedo gburugburu ebe obibi wee sonye n'ọkwa nchịkwa mmetọ. A kwalitela nzacha na-ehicha onwe ya n'ahịa kemgbe ahụ.
Ihe kpatara nzacha nhicha na-akpaghị aka na-eme ka ndị mmadụ mata nchedo gburugburu ebe obibi bụ na o nwetala ọtụtụ nsonaazụ nchịkwa mmetọ, ibelata nsị na ịchekwa ume.
Agbanyeghị na nzacha nhicha onwe onye zuru oke bụ akụrụngwa nzacha mmiri, mmetụta ya na-eweta abamuru n'ọtụtụ akụkụ. Were ihe na-akpaghị aka na-ehicha onwe ihe atụ. A na -amata igwe igwe akwụkwọ dị ka nnukwu onye na -eji mmiri eme ihe. Tupu iji nhicha nhicha onwe onye zuru oke, maka uru ozugbo dị mkpirikpi, ụlọ ọrụ na-ewepụta nnukwu mmiri nsị ozugbo na-enweghị ọgwụgwọ, na-ebute mmetọ osimiri gburugburu. Mgbe iji nhicha nhicha onwe onye na-akpaghị aka, ọ nwere ike belata mmetọ nsị na okike, enwere ike nyekwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka iji ya mee ihe ọzọ, na-ebelata nnukwu ego itinye ego na mmiri. Gini mere ị gaghị eme ụlọ mmepụta ihe.
Ihe nzacha nhicha onwe onye na-akpaghị aka dị ka ntụpọ, nke na-ehichapụ adịghị ọcha niile dị nsị, na-enye anyị mbara ala na-acha akwụkwọ ndụ.